PELARGONIUM NORLAND: SHARAXAADDA MUUQAALKA, TAARIIKHDA DHACDOOYINKA, XEERARKA BEERAHA IYO DARYEELKA, GAAR AHAAN DHALMO, IYO SIDOO KALE CUDURRADA CAADIGA AH IYO CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Waxyaabaha ku saabsan Norland pelargonium: xeerarka koritaanka iyo daryeelka
Noocyada Terry ee pelargonium degaan meel gaar ah ee qalbiyada ee bannaanka - burooyinkeeda cirridka muuqaal aad u qurux badan oo cajiib ah. Sababta oo ah muddo dheer, ubaxa qurxinta, dhirtaas waxaa lagu beeray balakoono, gumeysi daaqadaha iyo meelaha banaanka ah.
Pelargonium Norland uqalminta dareen gaar ah, markaa ka fikir in sida loo beeray si wanaagsan loo daryeelo ubax? Sida looga hortago cayayaanka iyo dacaayada.
Norland - Terry, jonal zanial, muuqaal gaar ah oo taas oo loo tixgelinayo saameyn ku qurxinta. Tani waa isku-jir ah oo la kori karo labada daaqadaha iyo bannaanka furan. Qaar ka mid ah soosaarayaasha abuurka waxay u adeegsadaan noocyada kala duwan ee loo yaqaan "rosebud", laakiin tani maahan kiiska - tani waa xajmiga nooca aagga.
Nortland waa wax aan qabyo ahayn, wuxuu u baahan yahay daryeel caadi ah iyo waraabinta. Dhibaatada keli ah ee bilawga bilawga ah ayaa wajihi kara abuuritaanka baadiyaha.
Kala duwan waa mid aad u qurux badan - ballaaran oo cufan oo caan ah oo loo yaqaan 'pink pink porches' kaas oo u eg midabada peony. Buundo sare leh caleemo cagaaran oo cagaar ah oo ku yaala kuwaas oo burooyinkeeda gaarka ah ay u muuqdaan kuwo weyn.
Waa muhiim! Warshadu waxay bixisaa caleemo dheer oo xoog leh, iyo haddii aadan isticmaalin manjooyin iyo qanjaruufo, qurxinta ee baadiyaha pelargonium ayaa gabi ahaanba lumay. In kasta oo xaaladaha dhulka furan, pelargonium loo oggolaan karo inay koraan sida ay rabto.
Haddii aad go'aansato inaad ubaxdaan abuurtaan abuur, ka dibna qofna kuma siin doono talooyin cad oo ku saabsan beeridda. Khabiiradu waxay ku talinayaan abuurka beerashada guga ama xagaaga, marka ay jiraan kulayl badan iyo iftiinka qorraxda.
Beeralayda khibrad leh waxay tixgeliyaan waqtiga ugu wanaagsan ee beerto - bilowga Maarso. Ka dibna burooyinkeeda kowaad ayaa laga arki karaa bisha Luulyo. Qaarkood waxay yiraahdaan waa in lagu beeray dhamaadka bisha Nofeembar bilawgii December, iyagoo ku doodaya in marka abuurka la kariyo, iftiinka qorraxdu aanay muhiim ahayn, iyo marka geedo soo baxaan, waxaad dhigi kartaa dhabarka. Sidaa darteed, waxay ku hawlan yihiin geedo ku dhowaad sanadka oo dhan. Waxaa haboon in la ogaado in germanyum uu kori doono cabbirka dhexdhexaad ah illaa 4-5 bilood.
Sida dhammaan pelargoniums, Norland waxay u baahan tahay macmacaan, waa in uu jiraa iftiin badan, laakiin qorraxdu si toos ah ayey uga bixi kartaa gubashada caleemaha iyo ubaxa. Sidaa daraadeed, duhurkii, waxaad u baahan tahay inaad u qalabeysid shucaaca inta ka dhiman waqtiga iftiinka waa inuu noqdo mid wanaagsan oo kala firdhisan.
Iyo qorraxda tooska ah iyo la'aanta iftiinka si siman u saameeya pelargonium - waxay diidi kartaa in la Bloom. Isla mar ahaantaana waxay sameeyeen cagaar cagaaran.
Norland waa noocyo kala duwan oo aan u dulqaadan karin, heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka wanaagsan iyo ubax culus + 18-23 digrii xagaaga, laakiin xilliga jiilaalka waa +12. Hawada furan waxay saameyneysaa geranium, taas oo ah sababta ay u degto xagaaga ee ku yaalla barxadda, balkoonka ama beerta.
Geedka loogu talagalay caleemaha zoonal wuxuu u baahan yahay nafaqo aad u nafaqo leh, bacrin ah, oo leh jajabyo. Waxaad ka iibsan kartaa dukaanka ama aad naftaada ka dhigi kartaa. Halabuurka ciidda waa sida soo socota:
2 qaybood oo ah dhul caleen ah;
1 qayb ka mid ah ciidda aan qalafsanayn.
Dhirta waa dheecaan aad u muhiim ah. Pelargonium ma jecla biyo joogta ah dheriga, halka xididdada caleemaha iyo geedku dhinto. Maadaama balaastigga loo isticmaalo kiiloomitir, ganaaxyada jaallada, lebbiska jajaban, quraarada ganaaxa, iyo wixii la mid ah. Caleemaha geedku waxay ubaahan yihiin oksijiin, sidaas darteed midka dhulka ku jira wuxuu u baahan yahay in si joogta ah looga furo.
Golaha Ma aha lagama maarmaan in lagu daro badan oo peat ah si ay ciidda, waxa uu hayaa qoyaanka - ciidda noqon doonaa joogto ah ka badan-qoyan.
Pelargonium Norland - si fiican ayey u koraan, ubaxuna ku dhajiyaan daaqadaha, laakiin si ay ubaxu u badato, waxaad u baahan doontaa inaad daryeesho. Xeerarku ma aha mid dhib badan, laakiin si ay warshadu u noqoto mid xoog leh oo caafimaad leh, waxaa haboon in lagu fuliyo su'aal la'aan.
Xilliga xagaaga, waraabinta waa in ay ahaataa mid aad iyo aad u badan, tan iyo markaas in muddada kulul, ubbooyo ubax ee pelargonium, laga bilaabo la'aanta qoyaan, laga yaabaa inay dhaco. Laakiin waqti isku mid ah, ma aha lagama maarmaan in dib-u-qoyaan dhirta, iyo haddii qoyaan uu ku ururay digsi ka dib markii waraabiyo, waxay u baahan tahay in la miiro - tani waxay ka hortagi doontaa lakab saarista xididada.
Markaad waraabisid, isticmaal keliya keliya kala soocid, biyo jilicsan, oo aan ku jirin wax ka soo goyso. Ma aha lagama maarmaan in la buufiyo pelargonium inta lagu jiro ubax, ma aha oo kaliya lumiyaan saamaynta qurxinta, laakiin sidoo kale qudhmi.
Wixii Norland Pelargonium kaliya Bacriminta macdanta ayaa la adeegsan karaa. Cunto geedka ayaa si adag loo mamnuucay. Laakiin tani waxay ka walwalsantahay oo keliya noocyada kala duwan, dhammaan geraniumku waxay leeyihiin aragti xun oo ku saabsan bacriminta dabiiciga ah. Waxaa ka wanaagsan inaad sameyso dhismooyin macdanta inta lagu jiro xilli firfircoon iyo ubax degdeg ah. Dharka ugu sareeya waxaa la sameeyaa 2-dii toddobaadba mar. Xilliga qaboobaha, ma'aha lagama maarmaan in la sameeyo cunto dheeraad ah.
Pelargonium ma jecla isbeddelada badanaaba, sidaas darteed, ilaa dheriga ma aha, cad, waxaa fiican in aan taabto si adag. Si loo go'aamiyo tani waa mid aad u fudud - xididdada dhirta ayaa ka saari doona godadka dheecaanka.
Ha qaadin dheri weyn markaad transplanting - Pelargonium waxay joojin doontaa ubaxyada, dher kasta oo cusub waa in ka badan 1.5 cm ka badan kii hore.
Ciidda dhoobada waa in si buuxda loo bedelo.Si arrintan loo sameeyo, si taxadar leh u sii daaya xididdada ka soo ciidda hore, isku dayaya in aan waxyeello, ka dibna wareejinta pelargonium si ciidda cusub. Daaweynta sare ee dhirta ka dib ayaa aan la qaadin bil gudaheed iyo badh, sida dhulka cusubi horey u nafaqay.
Ma taaban kartid dhirta inta lagu jiro xilli firfircoon., waxaad u baahan tahay inaad sugtid ilaa otomelandka pelargonium oo gasho xaalad nasasho. Waxay sidoo kale u dulqaadan doontaa xubin goos goos ah guga hore.
Digniin! Qaar badan oo beeralayda ubaxa ah ayaa sheeganaya in ka dib marka pelargonium koraayo illaa 30 cm oo dherer ah, ma ahan lagama maarmaan in la soo celiyo.
Pelargonium Norland waxay u baahan tahay tayo sare leh oo joogto ah. Tani waa habka kaliya ee lagu sameyn karo baadiyaha quruxda badan, isku dhafan iyo cufan leh ubaxyo badan oo waaweyn.
Nidaamkan waxaa la soo saaray guga, caleemaha waxaa la gaabiyey by saddexaad. Gooyo waxay kuu ogolaaneysaa inaad kiciso ubax si ay u sameyso caleemo cusub iyo ubax. Haddii aan lahayn jiido iyo manjooyin ayaa la sameynayaa, markaa germanium wuxuu u fidin doonaa kor-u-kiciid, caleemaha hoose wuxuu ka soo baxayaa caws iyo ubax ayaa laga tegayaa iyadoo aan la sugin. Xilliga dayrta, caleemaha qalalan iyo daciif ah ayaa laga saaraa baadiyaha, sidaas awgeed inta lagu jiro xilliga nasashada ee pelargonium waxay xoogga saartaa ubax cusub.
Dulqaadka casharka filinka pelargonium:
Ma jiro warshad guriga ah oo aan lagu dabooli karin cudurrada iyo weerarada cayayaanka, iyo Norland Pelargonium maaha mid ka reeban. Waa maxay infakshanka iyo cayayaanka waxyeeli karaan geedka:
Qamadi ciriiri - Cudurada ugu caansan ee asal ahaan fungal, oo si dhakhso ah u faafa. Calaamada ugu horeysa ee kalluunka casaanka ayaa ah dhibco u muuqan kara qayb kasta oo ubax ah, caleemaha ugu horeysa ayaa la saameeyaa, ka dibna afkoda iyo burooyinkeeda. Fungus parasitic horumariyaa haddii ay jiraan badan oo nitrogen iyo qoyaanka ciidda.
Si aad ula qabsato cudurka waxaa lagu caawinayaa fungicides: Vitaros, Rovral, Fundazol.
Root iyo stem rot - Magac ayaad ku fahmi kartaa qaybo kamid ah warshadda ay ku dhacaan. Sababta oo dhan waa qoyan.
Whitefly, mealybug - warshad ay saameeyeen cayayaankaasi waxay joogsadeen si ay u koraan, lumiyaan qurxinta, dabacsan, iyo haddii aan la macaamilin, way dhiman kartaa. Si aad ula dagaallanto waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kiimikooyin gaar ah - sunta cayayaanka.
Caawin Pelargonium marar dhif ah ayaa soo weerara cayayaanka iyada oo sabab u ah urta qallafsan.
Habka ugu caansan ee dhalmada ee pelargonium waa buro, oo tixgelin. Haddii la go'aamiyo in laga gooyo jirida geedaha hooyada, ka dibna waxa fiican in aan u sii dillaacin sannad, ka dibna marka wax laga beerto waxay noqon doontaa mid xoog leh oo caafimaad leh. Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, ka dibna isla xilliga xagaaga ee xagaaga dhirta dhalinyarada ayaa ku farxi doona ubaxooda.
Algorithm waxqabadka waa sida soo socota:
Caleemaha loo jarjarayo taranta bisha Maarso, waayo waxay isticmaalaan qalab fiiqan, qalab nadiif ah. Gooyada waxaa lagu sameeyaa xagasha 45 darajo. Halkaa waxaad u baahan tahay inaad ka tagto 2-3 internodes.
Gooynta ayaa hawada lagu qalajiyey ilaa 10 saacadood.
Ka saar caleemo hoose ee saxaradu diyaarsan tahay, haddii kale waxaa laga yaabaa in ay dhulka ku boodaan.
Gooynta waxaa si degdeg ah lagu meeleeyay dhulka, kaas oo ka kooban ciid, ciid, perlite iyo vermiculite. Ka hor inta beerto, qoyan substrate.
Ku dabool daboolka adoo ku jira weel dhalada ah, iyada oo aanad iloobin maalin kasta.
Caleemaha qulqulatadu waxay u muuqan doonaan toddobaad iyo badh. Isla markiiba ka dib, waxay ka saaraan weel, iyo warshad dhalinyaro ah waxaa lagu quudin jiray dhismo macdan.
Pelargonium waa dhirta quruxda badan leh ee ku habboon guriga iyo beeraha. Muuqaalkayaga ku saabsan noocyada kala duwan ee Cold, Clara San, Grandflora, Richard Hudson, Zonartic, Prince Gustav, Mildfield Rose, Patricia Andrea, Salmon, Lady Gertrude on our website.
Pelargonium Norland - ubax ayaa lagu jecel yahay dalal badan. Sifooyinka qurxinta ee dhirta iyo fududaynta daryeelka ayaa kuu oggolaanaya in aad ubaxaan quruxda quruxda badan meel kasta.